China emnyango isibambo FOR Mercedes Iinkuphelostencils Ngaphandle Ngaphandle Ingcango Handle Ekhohlo / Ekunene 9017600359 9017600459 0007601359 mveliso kunye nabathengisi | ZODI Auto Yiba nenceba
Ioyile yaManzi Sperator Bowl 20771578
Isibambo soMnyango weMercedes Iinkuphelostencils Ngaphandle Ngaphandle Ingcango yokubamba Ekhohlo / Ekunene 9017600359 9017600459 0007601359
OE NO.: 9017600359, 9017600459, 0007601359
Uhlobo: Isibambo sendlu
Imoto Yenza: KwiMERCEDES-BENZ
Izibambo zeMoto eziPhatha uMgangatho oPhakamileyo weSprinter 901 902 903 Isibambo seZitshixo zeSango 0007601359
Igama Izibambo zeMoto eziPhatha uMgangatho oPhakamileyo weSprinter 901 902 903 Isibambo seZitshixo zeSango 0007601359
Isiqinisekiso Iinyanga ezili-12
OEM Uyilo loqobo lwe-OEM
Igama lebrand Iinxalenye Super
Ixesha lokuhlawula L / C, T / T, Western Union, Moneygram, PayPal
Iphakheji Ukupakisha okungathath'icala
Ixesha lokuzisa Kwiintsuku ezili-15 emva kokuqinisekisa intlawulo
Eyona ntengiso Amazwe aseYurophu, eMpuma mpuma kweAsia, Middle-mpuma, Afrika kwaye amanye aseMelika
Ukubekwa kwisithuthi: Ngasemva okanye ngokutyibilika ngasekhohlo nasekunene
KwiMERCEDES BENZ SPRINTER ATEGO AXOR
Ye-VW LT 1996-2006
Singumvelisi oqeqeshiweyo wamalungu e-auto, inclouding Volkswagen Transporter, Fiat Ducato, Ford Transit, Renault Master, Benz Sprinter, Iveco Daily njl.Ngaphandle koku sinokubonelela ngala maxabiso athembekileyo kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu kuwe.
1. Ukutshixa ucango
2. Isibambo Socango
3. Isilinda esitshixwayo
4. Ucinezelo Tshintsha
5. Door mqengqeleki
6. Abanye (Nxibelelana nathi)
1, ilogo yongezwa njengoyilo lomthengi ngokwakhe.
2, Uluhlu olupheleleyo lweenkcukacha
3, ulawulo lomgangatho olungqongqo
4, ixesha elide ekusebenziseni nasekuxhomekekeni kokusebenza
5, Ulwazi loBugcisa boBuchule;
6. Abasebenzi abajongene neNkonzo;
7. ISysterm kunye neeNtsebenziswano zaBavelisi abaGqwesileyo;
8, Inkqubo yoLawulo lweMiqathango engqongqo;
I-9, eyiNdawo yokuGcina efanelekileyo neKhuselekileyo.
10.Packeging kakuhle kwaye ngokucocekileyo, ngokutsho clients'requirment
11.Nika iingcebiso zobungcali kubathengi abakwiimarike ezahlukeneyo
Icandelo lecandelo Igama leNdawo ezenzekelayo Umgangatho weBakala
Icandelo leNjini Yathetheka ke Plug, itankana isilinda, intloko isilinda, isilinda, isiBeki, piston iseti, piston ring iseti, impompo oyile, tyhala intonga, iseti ivalve, ingalo rocker, cam umlandeli, cam umlandeli nge shaft, iziko clutch, clutch yangaphandle, cam shaft, izixhobo isantya, njl. I-OEM, uA
Izixhobo zokuhambisa Ishaft yokukhaba ukuqala, i-crank shaft, indawo yokuhlala iesile, ikhithi yentonga yokuqhagamshela, iseti ye-sprocket, i-clutch assy, ​​i-clutch disc, ipleyiti yoxinzelelo lweklatshi, ikhonkco njl. I-OEM, uA
Iinxalenye zamavili Ihabhu yangasemva, i-cap yangemva kwebhubhu, ikhubhu yangaphambili yehabhu, ihabhu engaphambili, iprocket, idisk yokuqhekeza ngaphambili, ipleyiti yokuqhekeza, isihlangu esiqhekeziweyo, irim, ihabhu yangemva yerabha, ikhola yomqamelo, ukuqhuba umdyarho, wathetha, ibhawuthi yentsimbi ngasemva, i-asi, isikhululo se-hydraulic brake master cylinder njl. I-OEM, uA
Icandelo leCandelo Intambo yokubamba, iklatshi yokubamba, ukuqhekeza ngaphambili, intambo yemitha, intambo yokutshintsha ngaphambili, iswitshi yesantya, umgca webhetri, ukubopha iintambo, ukutshintshela ukubopha ngasemva, intambo yesantya njl. I-OEM, uA
Amalungu omzimba Isixhobo sokumisa umva esingasemva, isiqu se-stey yentloko, i-pedal change pedal, i-stey ye-stem, i-brake rod, i-brake pedal, i-muffler ye-exhaust, ukuphumla kweenyawo zerabha, isiphatho esime ecaleni, ukothuka ngaphambili, ukuma kweziko, isihlalo, itanki yezibaso, ibha yokubamba, ngaphambili unodaka I-OEM, uA
Izahlulo zombane Iseti yeclutch / yokuqhekeza iswitshi, ibhetri, i-esile yeevili ezibhabhayo, iklatshi / i-brake lever kunye nokutshintsha i-assy, ​​i-starter relay, uphondo, i-flasher, i-stator self assy, ​​isiphatho sokutshixa, isikhiya sepetroli, i-stator assy, ​​i-coil ye-starter / i-coil elula, C, D, I Isilungisi, umatshini wokutshaya ucinezelo, itanki yamafutha njl. I-OEM, uA
Iiplastiki I-bulb holder, i-assy yemitha, isibuko, imeko yokukhanya kwentloko, ikharityhulam ye-cover, iseti yokukhusela i-lever, ukukhanya kwentloko yendlu, i-fender yangaphambili, ukukhanya komsila welensi, i-fender yangemva, ikhava yentsimbi, ukukhanya kwentloko, ukukhanya komsila, ukukhanya kwe-winker, ikhava esecaleni njl. . I-OEM, uA
Uluhlu lwegasket Ikhithi yetywina yeoyile, isilinda yegasket, ukukhupha i-gasket, ikiti epheleleyo yegasket, iseti yerabha yokubamba, ukudibana kwe-carburetor njl I-OEM, uA
Izixhobo Ibhokisi yomsila, iminqwazi, isincamathelisi, ikepusi, iimpahla, iiglavu, inkosi yepeyinti, inkqubo yealam, mp3, inkqubo yealam alarm mp3-2, inkqubo yealam, itanki yezibaso, inyozo ngasemva ngonyawo ngombala, inyawo elingasemva elinombala ofakeleyo, irubbe kunye umbala, itywina lokutywina, ukubamba irabha ngombala njl.
Umgangatho kunye neNkonzo e-ZODI, eyona nto iphambili kuthi # 1 ibisoloko inikezela abathengi bethu ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye nenkonzo yabathengi ebalaseleyo.
Ixesha elikhokelayo elikhawulezileyo Sizinikele ekunikezeleni awona maxesha akhawulezileyo okutshintsha kwaye sisebenze nzima kakhulu ukuqinisekisa ukuba yonke imihla yakho emiselweyo iyafezekiswa.
Amaxabiso angenakubethwa Siyaqhubeka nokuzama ukufumana iindlela zokunciphisa iindleko zethu zemveliso, kunye nokudlulisela ulondolozo kuwe!
Ukuqaqanjiswa kweBrand Injongo yayo nayiphi na into eyomeleleyo kukufumana inqanaba lokwazisa elibethelela umbono wobulunga kunye nexabiso kubo bonke abathengi bakho.
Ukwabelana ngokuBodwa ngeziXhobo-Sinokuyila ikhathalogu ngokusekwe kwisicelo sabathengi sokukunceda ukuba uphuhlise iimarike ezintsha;
Ulwazi oluqhelekileyo loMyalelo
Siyazingca ngomsebenzi wethu nakwiindidi ngeendidi zeemveliso esizibonisayo. Sinamava ekuncedeni uMbindi Mpuma, iAfrika, imakethi yaseMelika, imakethi yaseYurophu kunye nemarike yaseAfrika, imakethi yase Mzantsi Melika.
Nceda uqaphele ukuba amaxesha ethu akhokelela kwimveliso axhomekeke kwizinto ezithile kunye nobungakanani bezinto. Impumelelo yethu isekwe ekuqondeni kwethu iimfuno kunye nohlobo lwexesha lokuthengisa kunye nentengiso.
Yiyo loo nto sihlala siqinisekisa ukuba yonke iodolo ihanjiswa ngexesha.
Jonga apha ngezantsi ngolwazi oluthe kratya xa ufaka iodolo
1. Uphando-Professional iikoteyishini.
2. Qinisekisa ixabiso, ixesha lokukhokela, ukupakisha okufunekayo, ixesha lokuhlawula njl.
3. Ukuthengiswa kweZODI kuthumela i-Invoice yeProforma kunye nesitywina seZODI.
4. Umthengi wenza intlawulo yedipozithi kwaye asithumele irisithi yeBhanki.
5. Siza kwazisa umthengi ukuba siyifumene intlawulo, silungiselele imveliso kwaye sazise ixesha eliqikelelweyo.
6. Ukuphelisa imveliso yeemveliso zobuninzi bokuvunywa. Unokucwangcisa nokuhlolwa kweqela lesithathu.
7. Abathengi benza intlawulo yemali eseleyo kunye ne-BEE bayithumela impahla .Kwakhona banokwamkela ixesha lokuhlawula ibhalansi ngokuchasene neB / L Ikopi okanye iL / C yexesha lokuhlawula. Yazisa inombolo yokulandela umkhondo kwaye ujonge imeko yabathengi.
8. Uku-odola kunokuthiwa "gqibezela" xa ufumana iimpahla kwaye wanelise ngazo.
9. Ingxelo nge-BEE malunga noMgangatho, iNkonzo, ingxelo ngeMarike kunye neengcebiso. Kwaye sinokwenza ngcono.
Q: Zeziphi iindawo auto ngaba unikeze?
A: Inxalenye yeenjineli, Amalungu e-Automobile chassis, ukumiswa kwamalungu e-auto, inkqubo yokuhambisa izithuthi, izihluzi zeZithuthi, iinxalenye zepreyiti yokuqhekeza kunye nezinye iintlobo zezinto ezizenzekelayo.
Q: Ngaba iimveliso zakho zisetyenziswa kwihlabathi liphela?
A: Ewe, sinika iMid-mpuma, iAfrika, uMzantsi Melika, iAsia esezantsi, iUkraine, i-Itali, iAustralia kunye nokunye, iindawo ezininzi zenjini zisetyenziswa jikelele kwisicelo.
Q: Yintoni na imiqathango yakho intlawulo?
A: T / T-30% njengedipozithi, kunye ne-70% ngaphambi kokuziswa.
Q: Njani ngexesha lokuhambisa kwakho?
A: Ngokubanzi, kuya kuthatha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-10 zomsebenzi emva kokufumana intlawulo yakho kwangaphambili. Ixesha lokuhambisa elithile lixhomekeke kwizinto kunye nobungakanani beodolo yakho.
Q: Ngaba ukuvelisa ngokutsho iisampulu?
A: Ewe, sinokuvelisa ngeesampuli zakho okanye kwimidwebo yobugcisa. Singazakhela ukungunda kunye nokulungiswa.
Q: Ngaba uvavanya zonke iimpahla zakho ngaphambi kokuziswa?
A: Ewe, sinovavanyo lwe-100% ngaphambi kokuziswa.
Q: Wenza njani ishishini lethu ixesha elide kunye nolwalamano oluhle?
A: 1. Sigcina umgangatho olungileyo kunye nexabiso lokhuphiswano ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bayazuza.
2. Siyahlonipha wonke umthengi njengomhlobo wethu kwaye ngokunyanisekileyo senza ushishino kwaye senze ubuhlobo nabo, nokuba bavela phi na.
Egqithileyo Iinkuphelostencils Belt Tensioner Pulley for Mercedes-Benz OEM 0005500833 0005501633
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu weLampu yeNtloko efanelekileyo ye-MB CABINA641 6418200861 LH 6418200961 RH 3818203961 LH 3818204061 RH
Isibane senkungu seBENZ ACTROS MP2 L: 9438200056 okanye R: ...
Plastic yangasemva Mudguard Oem 9435200020 for MB Act ...
ethengisa eshushu yaseYurophu iilori enzima auto spare pa ...
Factory Wholesale Kuba Benz waqhekeza Igubu OEM 62442 ...
OEM 9608103516 LH iinkuphelostencils ecaleni isipili kuba Mercede ...
Cast Iron Iinkuphelostencils Front Brake Igubu 6584210001 for MB